🥇 ▷ Warar xan ah ayaa sheegaya in iPhone-ka soo socda uu ka tagi karo 3D Touch ✅
Warar xan ah ayaa sheegaya in iPhone-ka soo socda uu ka tagi karo 3D Touch
Warar xan ah oo dheeraad ah ayaa sii wadaya inay soo baxaan iPhone-ka soo socda ee aan arki doonno bilaha soo socda maantana wararka xanta ah waxay si toos ah ula xiriirtaa shaqada xiddig ee Apple Waxaan u naqaannaa 3D Touch.
Shalay waxaan kuu sheegnay in Apple soo bandhigi karto seddex moodel oo cusub oo iPhone ah, mid wuxuu noqon lahaa mid “dhaqaalo” badan leh oo keenaya faa iidooyin yar, halka nooca labaad uu ku dari doono wararka oo dhan cabir caadi ah, halka seddexaad uu noqon lahaa kan Nooca dheeriga ah (nooc ka weyn).
Markii hore waxaa la rumeysnaa in nooca ugu “raqiisan” uusan lahaan doonin teknoolojiyadda 3D Touch iyadoo ay ugu wacan tahay arrinta hoos u dhaca qiimaha. Si kastaba ha noqotee, wararka xanta ah ayaa sheegaya in saddexda moodel ee cusub ay ka maqnaan doonaan shaqadan.
3D Touch waa shaqo u muuqata mid aad u fudud in la horumariyo, laakiin runtu waxay tahay in taasi aysan ahayn maxaa yeelay waa qalab aad u adag. Taas waxaan ku dari karnaa inay tahay wax qabad in Apple Waxay leedahay wax la dayacay, marka lagu daro waxaad u badan tahay akhristayaasha qaaliga ah waad adeegsan kartaan hawshan, laakiin inta kale ee dhimashadu xitaa ma ogaan karaan in howshan ay ku jirto iPhonekaaga.
Sida iska cad go’aankan wali lama cadeynin, in kasta oo aan fogeyn fikirka ah inuu u maleyn karo inay run noqon karto. Sidoo kale, haddii taasi ay sidaas ahayd, waxay u badan tahay in Apple ay ku darto waxqabadka 3D Touch ee heerka softiweerka iyadoo la heli karo adoo si fudud riixaya una qabanaya shaashadda sida aaladaha Android.